मन्त्रीले नै गुहार मागेपछि सामाजिक संजालमा भाइरल – Classic Khabar
मुलुकभरका अस्पतालमा अहिले अक्सिजनको कमि छ । उपचारका लागि भर्ना भएकाहरु पनि अक्सिजन नपाएर छटपटाएका छन् । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेशी मिडियामा दिएको अन्तरवार्तामा अवस्था नियन्त्रणमै रहेको भनेपछि त्यसको आलोचना पनि भयो । आफ्नै प्रधानमन्त्रीले भनेको त्यो भनाईलाई गलत पुष्टि गर्दै जब मन्त्री नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत विरामीका लागि अक्सीजन माग्न थालेपछि उनी अहिले ट्रोल भएकी छन् ।
जानकी मेडिकल कलेज एण्ड हस्पिटलमा, २ जना बिरामीलाई अक्सिजन चाहियो :- यस्तो ट्वीट गर्दै महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री जुली महतोले आग्रह गरिन् । उनले आफ्नो वा परिवारका लागि यस्तो आग्रह गरेकी भने होइनन् । अस्पतालमा अक्सिजन नपाएर छटपटाएका बिरामीका आफन्तले मन्त्रीलाई फोन गरेर अक्सिजन मिलाईदिन आग्रह गरेपछि मन्त्री आफै अक्सिजन खोज्न लागेकी हुन् । अहिले उनको यो ट्वीट भाइरल भइरहेको छ ।
मन्त्रीले नै अक्सिजनको अभाव पुष्टि हुने गरी गुहार लगाउन थालेको भन्दै उनलाई ट्रोल बनाइएको हो । मन्त्रीले नै यसरी अक्सीजन खोज्दै सिडियो लगायतलाई फोन गरेपछि ति आफन्तको ज्यान बाँचेको छ । अञ्चल अस्पताल जनकपुरमा छट्पटाइरहेका एक विरामीका आफन्तबाट मन्त्री महतोसम्म आइपुगेको आग्रहका कारण उनले पनि खोजेकी रहिछिन् अक्सिजन। धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि अञ्चल अस्पतालका डाक्टरसम्मलाई फोन गरेर अक्सिजन मिलाइदिएपछि ज्यान बचाउन सफल भएको मन्त्री महतो आफैले स्वीकार गरेकी छन् ।
Prevविवाह भएको २३ दिनमै यस्तो अवस्थामा भेटिएपछी ….
Nextआखिर किन नेपालमा कोरोना संक्रमित बिरामीहरु अस्पताल जान चाहाँदैनन् ?
१८ महिने बालिका बाल्टिमा डु बिन्, अस्पताल लैजान खोज्दा खोज्दै आयो अप्रिय